कठै! दशैं मनाउन फर्केको छोरालाई जंगली हात्तीले कि’चि’कि’ची मा’र्‍यो(भिडियो हेर्नुहोस्) – Dainik Sangalo
कठै! दशैं मनाउन फर्केको छोरालाई जंगली हात्तीले कि’चि’कि’ची मा’र्‍यो(भिडियो हेर्नुहोस्)
प्रकाशित मिति: सोमबार, आश्विन २५, २०७८ समय: ११:१६:१६
बाके अनि बर्दिया जिल्ला जैबिक बिबिधताले भरिपुर्ण ठाउ हो । यहाँ अनेक प्रजातिका जनावर र बनस्पतिहरु पाइन्छ्न । अनेकप्रकारका जङ्गलि जनावरमध्ये जङ्गलि हात्तिहरुको संख्या एकदमै धेरै रहेको छ त्यसैले हामी यहा हात्तिले निम्त्याएको प्र’को’पको विषयमा अनेक खबरहरु सुन्न अनि देख्न पाइरहेका हुन्छौ । आजको घ,ट,नापनि यस्तै विषयसग आधारित छ ।
बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर १० मा घर भएका ४० बर्षका बेचन चौधरीलाई कामबाट दसै मनाउनको लागि घर फर्किने क्रममा जङ्गलि हात्ती आ’क्र’म’ण गरेको छ र यो आ’क्र’म’णबाट उनले आफ्नो ज्या,न गुमाएका छ्न । जङ्गलि हात्तिले उनको श’ब हेर्नलायक पनि न’छा’डे’को कुरा प्रत्यक्षदर्शिले बताएका छन । टाउको फु’टा’इ’दिएको र हातपनि भा’चि’दि’एको कुरा घ,ट,ना,लाई प्रत्यक्ष देख्ने ले बताएका छन ।
कम्पनिमा खाना बनाउने सामान्य काम गर्ने उनको घरको आर्थिक अबस्थापनि निकै क’म’जो’र छ र मृ’त’कको परिवारको पनि बिचल्ली भएको छ । मर्निङ वाल्कमा जादा उनको शब सर्बप्रथम देखिएको कुरा पनि गाउले बताए । मृ’त’कको हालत यस्तो भएको रहेछ कि उसले लगाएको कपडाबाट चिनिएको रहेछ मृ’त’कलाइ । हात्तिले पुरै अनुहारनै किचेको कुरापनि गाउलेहरुले बताए अनुहारको नक्सा नै बि’ग्री’ए’को कुरा पनि गाउलेहरुले बताए ।
हरसाल यस्ता घटना भने घट्ने गरेको कुरा पनि गाउलेहरुले बताए । त्यो जङ्गलि हात्ती भने नेपाल र भारत दुबै निकुञ्जले आफ्नो नभएको बताएका छ्न । ता’र’बा’र लगाइएको भनिएतापनी त्यो प्रभावकारी नभएको कुरा पनि गाउलेहरुले बताएका छ्न । दसैको मुखमा घटेको यो घटनाले पुरै गाउँ स्त’ब्ध भएको छ । गाउकै एक सदस्यले हाम्रो सुरक्षाको विषयमा मिडियामार्फत हाम्रो कुरो सरकारसामु पुर्याइदिनुपर्ने कुरामा उनले जोड दिए ।
एक महिलाले त घटनास्थलमा पुगेर मृ’त’कको फोटो पनि खिचेर ल्याएकि रहिछ्न । एक गाउलेले एकपटक ७० वटा हात्तिको झुन्ड आएको कुरा पनि बताए । नेपाल सरकारले ता’र’बा’रको व्यबस्था गरेतापनी त्यो त्यति संरक्षित हुन भने नसकेको कुरा पनि उनले बताए । करेन्ट अनि सिउडिको पनि प्रयोग भने नभएको हैन तर त्यो त्यति प्रभावकारी नभएको कुरा गाउलेहरुको रहेको छ । सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने कुरामा गाउलेहरुले जोड दिएका छ्न ।बाकि हेर्नुस तलको भिडि
Last Updated on: October 11th, 2021 at 11:16 am